समाचार - २०२०..7.
1. हाम्रो कम्पनीको बारेमा
हाम्रो कम्पनी एक एक स्टप व्यापार सेवा कम्पनी हो जुन एकीकृत फ्याब्रिक विकास, उत्पाद डिजाइन, उत्पादन र बिक्री। मुख्य उत्पादनले स्वतन्त्र अनुसन्धान र कपडाहरूको विकास, जस्तै स्पानडेक्स ल्याटेक्स (तेल सतह / ऐना सतह) को उपयोग गर्दछ, ताना बुनेको नायलॉन अस्तर प्रयोग गरेर, कपडा पर्यावरण अनुकूल छ, चार तर्फी उच्च लोच प्रक्रिया, र सीएनएएस अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्क्रिया पत्ता लगाउने मानक पूरा गर्दछ। ; प्रभाव समान प्राकृतिक लेटेक्स सामग्री हो, तर मूल्य प्राकृतिक लेटेक्स कोटको मात्र १/3 छ, ताकि अधिक ग्राहकहरू जेल कोटले ल्याएको साधारण सेक्सी बन्धनको मजा लिन सक्नेछन्, र आधुनिक टाईटको स्टाइलिश वातावरणको अनुभव गर्न सक्नेछन्।
हाम्रो पोसाकमा धेरै आकारहरू छन्। घर र विदेशमा अधिक बडी आकारहरू फिट गर्नको लागि, जस्तै एफ श्रृंखला र टी श्रृंखला, उपयुक्त दायरा १ height०-१-1० सेमी उचाई हो, र तौल k० किलोग्रामदेखि 90 ० केजीसम्म छ। पेशेवर उच्च लोचयुक्त कपडा उत्पादन उपकरण समूह, उन्नत काट्ने खराद, काट्ने आकारलाई अधिक सटीक र अधिक कुशल बनाउन सक्दछ, र यसको आफ्नै सीएडी बौद्धिक आकार उत्पादन प्रणालीले परम्परागत अनुकूलन गति धेरै सुधार गर्न अनुमति दिन्छ।
हामी फेसनलाई सेक्सी बनाउनको लागि र फेसनलाई आकस्मिक रूपमा लगाउन दिन "ब्यापारको लागि डिजाइनिंग, सेक्सीको लागि अनुकूलन" लाई व्यवसायको उद्देश्यको रूपमा लिन्छौं।
उत्पादन शैली: सरल र सेक्सी यूरोपीयन र अमेरिकी शैली!
डिजाइन सुविधाहरू: फेशनेबल अंडरवियर, सेक्सी फेसन। अन्डरवियर बनाउनुहोस् जुन तपाईं फेसन अधिक सेक्सी बनाउन लगाउन सक्नुहुनेछ!
हाम्रो उद्देश्य: जीवन अझ राम्रो बनाउनुहोस्!
हामीले सँधै सेक्सी मार्ग लाई नेतृत्व गरेका छौं र उद्योगमा फलो-अपको उद्देश्य बन्दछौं। हाम्रो अब, अन्यले जान चाहेको सडकमा हिंड्दै छ तर हिम्मत छैन! मियासेन ईमानदारीसाथ अन्तर्देशीय पहिलो सेक्सी मार्ग ब्रान्ड सिर्जना गर्न अधिक च्यानल एजेन्टहरू र साझेदारहरूलाई एक साथ ल्याउँदछ!
२. हाम्रो फाइदाहरू
स्रोत निर्माता स्रोत केन्द्र
उद्योग र व्यापार एकीकरण B2B
कडा उत्पादकहरू, विश्वव्यापी सहयोग
सीमा पार आपूर्ति, विश्वव्यापी ढुवानी (फेडएक्स DHL यूपीएस टीएनटी एआरएएमएक्स)
कम्प्युटर प्लेट बनाउने, मूल डिजाइन,
कम्प्युटर काट्ने बिस्तर, उत्पाद गुणवत्ता निरीक्षण र वितरण, ग्राहक सेवा केन्द्र
१. स्रोत सामग्री विकास, सीएडी डिजाइन, उत्पादन, बिक्री, उद्योग र व्यापार एकीकरण मोड, गुणस्तर नियन्त्रण योग्य, उत्पादन क्षमता र वितरण दक्षता सुनिश्चित गर्न;
२. बौद्धिक सीएडी प्लेट-मेकिंग प्रणाली, मालिकको आत्म-विकसित बौद्धिक प्लेट-निर्माण प्रणालीले १० वर्ष अनुकूलन अनुभवले अनुकूलन क्षमता र आकार शुद्धतामा ठूलो सुधार गर्दछ;
Single. एकल टुक्रा अनुकूलन अन्तर्गत, २ delivery घण्टा भित्र सब भन्दा छिटो डेलिभरी गति, ग्राहक अनुकूलित डेटा3बर्षसम्म कायम राख्न सकिन्छ;
Products. हामी उत्पादनहरु को प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न ठूलो ग्राहकहरु लाई विशेष शैली को कपडा प्रदान गर्न सक्छौं;
The. मुख्य उत्पादन स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान र विकसित गरिएको छ। कपडा दुर्लभ, अद्वितीय र वातावरण मैत्री छ।
स्पानडेक्स ल्याटेक्स लेटेक्स फिल्म कम्पोजिट कपडा हो, जुन हाम्रो कम्पनीले स्वतन्त्र रूपमा विकसित गरेको छ। यसले न्यानो कम्पोजिट टेक्नोलोजी अपनाउँछ।
यो चारै तिर उच्च लोच छ, क्र्याक गर्न सजिलो छैन, पानी अवशोषित गर्दैन, र खेल र फिटनेसको पसिना समारोह छ।
यसको कस्ट प्रभाव प्राकृतिक लेटेकसँग तुलना गर्न सकिन्छ। यसले सिलिका जेल सामग्रीसँग प्रतिक्रिया गर्दछ र प्राकृतिक लेटेक्सको विकल्प हो।
स्पानडेक्स लेटेक्स फेब्रिक संयोजन: पहिलो लेयर लेटेक्स मिश्रित पीयू फिल्म हो, दोस्रो लेयर तानको बुनाइएको स्पानडेक्स लेयर हो, र तेस्रो लेयर नानो-सोखना तह हो।
मिरर स्पानडेक्स लेटेक्स फेब्रिक संयोजन: पहिलो लेयर लेटेक्स मिश्रित पीयू फिल्म हो, दोस्रो लेयर तानाको बुनाइएको स्पानडेक्स लेयर हो, तेस्रो लेयर ले एक लेन्टेक्स मिश्रित पु फिल्म हो।
।।उपलब्धि हामीले गरेका छौं
हाम्रो निरन्तर प्रयास पछि, यूरोपियन र अमेरिकी बजारमा निर्यात गरिएको हाम्रो स्पानडेक्स लेटेक्स टाइट्सको बिक्रीको मात्रा अमेरिका $ १ लाख भन्दा बढी भयो। यो हाम्रो बिक्री इतिहास मा एक नयाँ सफलता छ। हामी हाम्रा उत्पादनहरूलाई अझ लोकप्रिय बनाउनका लागि अनुकूलित गर्न र सुधार गर्न जारी गर्नेछौं। हामीले नयाँ डिजाइनर भाडामा लिएका छन जुन हामीलाई अझ राम्रा र लोकप्रिय शैलीहरू ल्याउँदछन्। हाम्रो उत्पादनहरू कपडाबाट डिजाइन, उत्पादन र बिक्रीमा स्वतन्त्र रूपमा पूर्ण हुन्छन्। यसले हामीलाई उत्पादनको गुणस्तर राम्रोसँग, समयमै उत्पादन समायोजन गर्न, पहिलो पटक ग्राहकको प्रतिक्रिया सुन्न, र निरन्तर हाम्रो उत्पादन सेवाहरू सुधार गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। हाम्रो उत्पादनहरु को देश र विदेश मा राम्रो प्रतिष्ठा छ, र देश र विदेश मा बहु प्लेटफार्म को बिक्री लगातार वृद्धि भईरहेको छ। हाम्रो ग्राहकहरु क्याटसुट परिधान उत्साही, साथ साथै देशी र विदेशी एजेन्ट र थोक बिक्रेताहरु सामेल छन्। तिनीहरूले पनि राम्रो बिक्री बनाए। हामी आशावादी छौं कि अधिक र अधिक ग्राहक र एजेन्ट थोक बिक्रेताले हाम्रो उत्पादन छनौट गर्नेछन्। हामी चाहन्छौं कि हाम्रा उत्पादनहरू विश्वको प्रत्येक कुनामा बेच्न सकिन्छ।
१० बर्ष भन्दा बढीको अनुभव पछि, हामीले स्वतन्त्र रूपमा CAD प्लेट निर्माण प्रणालीको एक बुद्धिमान अपग्रेड संस्करण विकसित गरेका छौं। यो कपडाको कम्प्युटर प्लेट बनाउने, कोडिंग, र सजावटको लागि सफ्टवेयर हो। यो नयाँ र पूर्ण सुविधित कपडा CAD प्रणाली हो। यो प्रणाली हाम्रो विशेष कपडाको डिजाइन र अनुकूलनको लागि बढी उपयुक्त छ। यो बुद्धिमानीपूर्वक अनुकूलित डाटा को काटना प्रदर्शन, र डाटा अधिक सही छ, जो हामीलाई ग्राहकहरु को लागी उपयुक्त उपयुक्त कपडा बनाउन मा मद्दत गर्दछ। हाम्रो लुगा साधारण कपडा भन्दा फरक छ। यसको लागि विशेष डिजाइनरहरू डिजाइन गर्न, विशेष कस्टम कपडाहरू, विशेष CAD प्लेट निर्माण र काट्ने प्रणालीहरू, र प्रशोधनका लागि पेशेवर टर्नरहरू आवश्यक छ। सिद्धताको पछि लाग्नु हाम्रो अनन्त लक्ष्य हो। हाम्रो क्याटसुट पूर्ण शरीर संयोजन, सिमलेस डिजाइन हो। यो कम्मरमा राम्रोसँग फिट हुन्छ र धेरै चिल्लो हुन्छ। माथिबाट तलसम्म कुनै पटहरूको कुनै ट्रेस छैन। यो हाम्रो पेशेवर उपकरण र पेशेवर डिजाइनर र पेशेवर दर्जीलाई धन्यवाद छ। तपाइँको सेवा गर्न एक समर्पित कपडा परामर्शदाता पनि छ। जब सम्म तपाईं आफ्ना आवश्यकताहरू माग्नुहुन्छ, हामी तपाईंलाई चाहिएको लुगाहरू प्रदान गर्न सक्दछौं।
O. हाम्रो नयाँ पोडक्टहरू
वर्तमानमा चीन र विश्वव्यापी रूपमा नयाँ कोरोनाभाइरसको प्रकोपका कारण हाम्रो कम्पनी यस बारे धेरै चिन्तित छ। बोडिसाइट र विभिन्न प्रकारका कपडाहरूको उत्पादनमा हाम्रो धेरै वर्षको अनुभवको आधारमा, हामीले बाँझो सुरक्षात्मक सूट र मास्कहरूको लागि दुई उत्पादन लाइनहरू खोल्यौं। हाम्रो सुरक्षात्मक सूट प्रयोज्य सांसनीय PE फिल्म र गैर बुनेको मिश्रित सामग्रीबाट बनेको छ। यो एक अगाडि जिपर र हुडको साथ एक पूर्ण शरीर सुरक्षात्मक सूट हो। यो विभिन्न आकारहरूमा आउँदछ र जलरोधक, डस्टप्रूफ, र ब्याक्टेरिया प्रतिरोधी हुन सक्छ। यसले दैनिक सुरक्षाको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छ। हाम्रो मास्क सामान्य डिस्पोजेबल मास्क र KN95 मास्क भन्दा फरक छन्। यसले परम्परागत मास्कको कमि छोड्छ। हाम्रो मास्क डिजाइन एकदम फैशनेबल छ, कालो र सेतो gingham सामग्री, शुद्ध कालो कपडा सामग्री, र कालो PU सांसनीय छालाको साथ। यो अभिभावक-बच्चा लगाउन को लागी उपयुक्त छ, र दुबै वयस्क र बच्चाहरू द्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा बिल्ट-इन फिल्टर परिवर्तन गर्ने पाना छ जुन बारम्बार सफा र प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो टिकाऊ र विकृत छैन, ऊर्जा बचत र वातावरण मैत्री, स्वच्छ र स्वच्छ, आरामदायक र सुन्दर छ। यदि तपाईंलाई मनपर्दछ भने, तपाईं हाम्रो वेबसाइटमा खरीद गर्न सक्नुहुन्छ, र घरेलू र विदेशी थोक बिक्रेताहरूलाई खरीद सम्झौताको लागि आउन स्वागत गर्नुहुन्छ।
पोष्ट समय: अगस्ट १ 14-२०२०